ARAKAN ARMY – Page7– Defenders of our Fatherland
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၁၉ / ၂၀) ရက်နေ့ ရခိုင်ပြည်တိုက်ပွဲသတင်းများ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ(၄)ရက်နေ့၌ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်မှ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ရှိ နယ်ခြားစောင့်တပ်စခန်း(၄)ခုအား မလွှဲမရှောင်သာတိုက်ခဲ့ရသော တိုက်ပွဲများအတွင်းမှ သိမ်းဆည်းရမိသောစစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများ၊လက်နက်ခဲယမ်းများနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများစာရင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက်၊ ရခိုင်ပြည်တိုက်ပွဲသတင်း ၂၀၁၉ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ(၄)ရက်နေ့၌ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်မှ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ရှိ နယ်ခြားစောင့်တပ်စခန်း(၄)ခုအား မလွှဲမရှောင်သာတိုက်ခဲ့ရသော တိုက်ပွဲများအတွင်းမှ သိမ်းဆည်းရမိသောစစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများ၊လက်နက်ခဲယမ်းများနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ AA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင်နှင့် အင်တာဗျူး (အပိုင်း – ၂)
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၁၉ / ၂၀) ရက်နေ့ ရခိုင်ပြည်တိုက်ပွဲသတင်းများ
13 hours ago Arakan Army
၂၀၁၉ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ(၄)ရက်နေ့၌ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်မှ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ရှိ နယ်ခြားစောင့်တပ်စခန်း(၄)ခုအား မလွှဲမရှောင်သာတိုက်ခဲ့ရသော တိုက်ပွဲများအတွင်းမှ သိမ်းဆည်းရမိသောစစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများ၊လက်နက်ခဲယမ်းများနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများစာရင်း
5 days ago Arakan Army
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက်၊ ရခိုင်ပြည်တိုက်ပွဲသတင်း
6 days ago Arakan Army
၂၀၁၉ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ(၄)ရက်နေ့၌ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်မှ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ရှိ နယ်ခြားစောင့်တပ်စခန်း(၄)ခုအား မလွှဲမရှောင်သာတိုက်ခဲ့ရသော တိုက်ပွဲများအတွင်းမှ သိမ်းဆည်းရမိသောစစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများ၊လက်နက်ခဲယမ်းများနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
AA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင်နှင့် အင်တာဗျူး (အပိုင်း – ၂)
4 weeks ago Arakan Army
2 months ago Arakan Army
AA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင်နှင့် အင်တာဗျူး (အပိုင်း – ၁)
VOA နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်မတော် အင်တာဗျူး
ARSA နဲ့ ပတ်သက်မှု မရှိဘူး
ဒီမိုကရေစီအစိုးရ အခုချိန်ထိ အလိမ်ခံနေရတုန်းပဲ – ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နှင့် မေးမြန်းချက်
2 years ago Arakan Army
လက်ရှိအခြေအနေ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်။ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် နှင့် မြန်မာစစ်တပ်တို့သည် ကာလအတန်ကြာ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကြီးများ မရှိခဲ့သော်လည်း ကြိုကြားကြိုကြားပြောက်ကြားတိုက်ပွဲများမှာလွန်ခဲ့သော နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်၊
United League of Arakan (ULA)/Arakan Army (AA) Press Released No. 13/2016 20 October 2016 It
ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် အမှတ်၊ ၁၃/၂၀၁၆
United League of Arakan(ULA)/Arakan Army(AA) ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်/ရက္ခိုင့်တပ်မတော် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် အမှတ်၊ ၁၃/၂၀၁၆ ၁၃၇၈-ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၄)ရက် ၂၀၁၆-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၀)ရက်
မောင်တော သတင်း ယနေ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၉)ရက် နံနက် ၂ နာရီခန့်အချိန်တွင်ရခိုင်ပြည် မောင်တောမြို့ ၌ မြန်မာအစိုးရ၏နယ်ခြားစောင့်တပ်စခန်းအချို့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဆီသို့ ဦးတည်လာသော (၂၁) ရာစု ပင်လုံညီလာခံအား ကြိုဆိုကြောင်း MNTJP/MNDAA၊ PSLF/TNLA၊ ULA/AA တို့၏သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဆီသို့ ဦးတည်လာသော (၂၁) ရာစု ပင်လုံညီလာခံအား ကြိုဆိုကြောင်း MNTJP/MNDAA၊ PSLF/TNLA၊ ULA/AA တို့၏သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် ၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း (၃)
လက်ရှိမြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်စဉ်များအပေါ် MNTJP/MNDAA၊ PSLF/TNLA ၊ ULA/AA တို့၏သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
မိုင်ဂျာယန်ညီလာခံ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ (July 26-29/2016)
ရီဘေးသင့်ရခိုင်ပြည်သူများအား ULA/AA မှ ကူညီထောက်ပံ့ပီးလားမည်
3 years ago Arakan Army
ရီဘေးသင့်ရခိုင်ပြည်သူများအား ULA/AA မှ ကူညီထောက်ပံ့ပီးလားမည် လက်ဟိ ရခိုင်ဒေသတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ရေကြီးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(United League of Arakan- ULA) အနီနန့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ
တိုက်ပွဲသတင်း ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လ (၉) ရက်နေ့၊ညနေ (၅) နာရီ (၄၀) မိနစ်အချိန်တွင် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊နွားရုံတောင်အနီး၌ မြန်မာအစိုးရ၏နယ်ခြားစောင့်တပ် နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်
တိုက်ပွဲသတင်း ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လ (၅) ရက် နှင့် (၆) ရက်နေ့များ၌ မြန်မာစစ်တပ် နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်မတော် တို့ တိုက်ပွဲများထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဇွန်လ
Happy Birthday Major General
Archives Select Month January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 May 2018 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 June 2015 April 2015 February 2015
Categories Select Category ABOUT US ACTIVITY ARAKAN FLAG BULLETIN ARTICLE BATTLE NEWS INTERVIEW SPEECH Statements ရက္ခိုင်ပြည်သတင်းများ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား သတင်း သတင်းဓာတ်ပုံ
9th Arakan Army Anniversy
Copyright ©ရက္ခိုင့်တပ်မတော်(Arakan Army) All rights reserved. | CoverNews by AF themes.